The akasununguka paIndaneti basa. Calculator musana
Kukarukureta pamusoro sawn matanda vhoriyamu
Sarudza kwokutanga mashoko nokuda kukarukureta pamusoro
Nhamba uchaputsanya N
Uwandu pa cubic metres E
Mari 1 cubic mita
kukarukureta pamusoro sawn matanda
W - Rakafara bhodhi
H - bhodhi ukobvu
L - Kureba mapuranga
N - Nhamba uchaputsanya
E - Uwandu pa cubic metres
Vakawanda vari kuvaka musha wako kana dzokugezera watarisana kudikanwa exchange sei nematanda zvakawanda zvinodiwa basa. Sarudza zvakadini unofanira kukwira kana danda, nyore. Asi mutengo nematanda inowanzopiwa unotaurwa pa cubic meter, uye ichi nyaya yamunenge kushandisa kuti pakuverenga purogiramu inokosha. Nokushandisa yedu yepaIndaneti iwe, achiziva pakureba, upamhi uye pakukora bhodhi, uyewo avo nhamba zvidimbu, uchakwanisa kuverenga sei mamita ane nematanda uchada uye zvakadini cubic zhinji ichava kurasikirwa cubic mita kana pepuranga rimwe.
Sawn matanda vanonzi vari nokuti kurikumbira sawing muti nehunde. Used musana pakuvaka, fenicha, akasiyana-siyana kavha nezvimwewo. Nhasi, kwakadai zvokuvakisa ndiyo inonyanya kufarirwa. Wood anoshandiswa kugadzira matanda rakaisvonaka insulating zvinhu, anoramba yakagadzikana mwando kunoda hapana vavashandire uye kutarisirwa, izvo zvinoita kuti kunyanya nyore.
Rinoreva sawn matanda, unocheka puranga, unedged, kuvaka njanji. Bruce ari matanda, kupatsanurwa kubva kumativi ose. Sezvazvakanyorwa atema sikweya kana rectangular muchinjikwa chikamu. The inonyanya matanda yaishandiswa pakuvaka dzimba, namabhati uye uriri mazano.
Kucheka bhodhi chinhu-chinja matanda kuti ari kushingaira kushandiswa mubasa rokuvaka kunze kuvaka, uye pamasikiro zvokunyaradza nzvimbo. Kucheka bhodhi kwepamuchinjikwa-chikamu chiri elongated rectangle. Unedged bhodhi yakasiyana reuna kuti yayo micheto vari usabvisa, zvokuti ichingori hunooneka paiva omuti, umo ichi bhodhi vakatongoparadzwa. Kuvaka njanji kana muzariro ari mubhawa, duku muchinjikwa-chikamu pane dzose, uye ari zvinowanzoshandiswa rokuvaka.
Sawn matanda vakasiyana mhando, izvo zvakaitwa. Vakavaita kubva coniferous miti, akadai nemipaini, spruce uye larch. Uye hardwood, akadai pomuouki, Beech, Birch, Aspen.
Kune matanda sezvo mwando. Vari akakamurwa mbishi ne mwando kwevari anopfuura 22 muzana uye nebvudzi mwando pazasi 22 muzana. First kushandiswa rokuvaka, uye ekupedzisira kuti kugadzirwa midziyo.
Kunewo mamwe marudzi vanoverengeka nematanda. giredhi Choice kunobva application. Saka, nokuti midziyo inotakura zvinhu zvinoshandiswa yepamusorosoro. Nokuti Joinery uye moldings akakodzera nematanda mamakisi 1 ne2 uye 3 giredhi unoshandiswa sechituso kuvakwa bhodhi.
Musana, kana vasiri kushandiswa kwenguva refu, vanoda kudzivirirwa kubva kuunyoro. Izvi zvingaita kuti kuderera kwavo. Hazvina akakurudzira chitoro nematanda ukapisa murwi pamusoro mumwe. Pakati akaturikidzana pakati pamapuranga kana mapuranga zvinofanira amudanire.